Izinto eziluncedo kuthi -I-Handan Qifeng Carbon Co, Ltd.
Umzi mveliso ngokuthe ngqo uthengise
Gcwalisa umgca wemveliso
Iinkonzo ezilungileyo emva kokuthengisa
Sitsalele umnxeba namhlanje ku-0086-18131011120 okanye nge-imeyile amy@qfcarbon.com
Iindleko zokuvelisa eziphezulu kodwa amaxabiso asezantsi entsebenziswano yethu yexesha elide. Unokhetho olwahlukeneyo kunye nexabiso lazo zonke iintlobo zithembekile ngokufanayo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, ungathandabuzi ukusibuza.
I-Handan Qifeng Carbon Co., Ltd. ngumenzi omkhulu wekhabhoni e-China, onamava emveliso angaphezulu kweminyaka eli-15, onokunika izixhobo zekhabhoni kunye neemveliso kwiindawo ezininzi. Sivelisa ikakhulu iiCarbon Additives (CPC & GPC) kunye negraphite electrode ezine-UHP / HP / RP grade.
Khetha udidi Iibhloko zeAnode Carbon Calcined Anthracite ICalcined Petroleum Coke / CPC I-Calcined Pitch Coke Izixhobo zeCarbon Ibhloko yeCathode Carbon Okufumaneka Grafayithi iibhloko Grafayithi i electrode Grafayithi ezilahliweyo Umzobo wePetroleum Coke / GPC Amandla ePhakamileyo eGrafayithi / i-Electrode / HP Iimveliso Rhoqo Amandla grafayithi i electrode / RP Amandla ePhakamileyo eGrafite ye-Electrode / UHP